Ngemva kokufunda okuhlangenwe nakho ngamazwe emzabalazweni ubushiqela eRussia sinqume ukuba bahoxe ekungeneleni amalayisense ezintweni ezithile , futhi uthathe indlela yokudala engenzi-nzuzo enemitheshwana izinhlangano, okuyinto abanalo ilungelo lokubuyiswa Ukubekezelela ukukhishwa semisebenzi iqhaza abalingani.
Ukuhlolwa uqalwe esanda kutholakala futhi angizange ngisifihle zonke imikhakha yezomnotho. Enye yezindawo lapho ukuxazululwa yokubhalisa KODWA - kwaba ukwakhiwa. Kusukela manje, ibhizinisi ukwakhiwa ngaphandle ubulungu SRO akuvumelekile. Njengoba kuboniswa umkhuba wokusebenzisa engenzi-nzuzo ngokubambisana phesheya, ukuqedwa sokulayisensa ukwakhiwa futhi kwathatha elikhiphe tolerances umlingani amanethiwekhi nomthelela ekuthuthukiseni ukuphepha kanye nekhwalithi umsebenzi owawenziwa, kanye nokuthuthukiswa othakazelisayo embonini yezokwakha.
Okwamanje, izwe lethu kancane kancane ancipha mpikiswano mayelana ukuhlobana emisha kanye ukungena CPO elalingumakhonya kakade. Kodwa naphezu kwalokhu, amabhizinisi amaningi namanje abaqapheli zonke izinzuzo eziyobenza bathole kudalwa engenzi-nzuzo, futhi ubulungu in the ngokubambisana ubonwa njengenhlangano isilinganiso eziphuthumayo, ngaphandle okuyinto akunakwenzeka ngokomthetho ukuqhuba umsebenzi wokwakha. Cabanga ngezinye zezinzuzo yobulungu SRO.
Okokuqala, ubulungu in the SRO inikeza amathuba nokubambisana yeningi phakathi kwamalungu zinhlangano, futhi inikeza inkhulumomphendvulwano eyakhayo namanxusa zikahulumeni kanye nohulumeni basekhaya. Yini eba ingenqophileko ngaphansi kwesimo igagasi elisha tetemnotfo.
Okwesibili, ubulungu inhlangano enemitheshwana inikeza izinkampani umlingani mayelana nokukhula komnotho professional kanye nokwenza ngcono amakghono wabasebenzi. Ngokuzibandakanya abameleli SROs e ekhethekile imisebenzi, izingqungquthela nezingqungquthela kuthiwa ukwandisa ibhizinisi izibopho ngokubambisana inzuzo.
Okwesithathu, izimiso ka zokuzisiza ukwenza ngcono ukuphepha kanye nekhwalithi ukwakhiwa kanye amakontraga, okuvumela ukucacisa yemfanelo eqondile usonkontileka ngamunye - inhlangano umlingani. Kwakheka ku ezihambisana nalesi siVumelwano ka SRO lwezezimali Isikhwama kunciphisa ubungozi ucabanga nokwesaba athwale icala izibopho besithathu.
Okwesine, ikhasimende uzimisele ngaphezulu ukunikeza isivumelwano ukwakhiwa amalungu SRO, ngoba inhlangano uba yisiboniso ukuthi ekwakheni izakhiwo kuzophothulwa kungakapheli eshiwo isikhathi ifreyimu elicacisiwe inkontileka. Endabeni izimangalo yikhasimende lobambiswano abameli izobamba iqhaza mpikiswano uthathe umfanekiso izithakazelo inkontileka ezimweni ezihlukahlukene.
Ngamafuphi, singasho ngokuphepha ukuthi ubulungu in the ngokubambisana engenzi inzuzo kwenza osomabhizinisi wahlanganyela embonini yezokwakha ukuthola ulwazi oluphelele kanye nokwesekwa zomthetho. Ngaphezu kwalokho, iqhaza ngokubambisana okungezona zokuhweba lula kakhulu inqubo kokujoyina SRO, nakho ithatha izintambo umsebenzi yokuxhumana ne abameleli neziphathimandla zendawo.